HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 Kocaeliမိမိအကားမောင်းသူulaşımparkကြီးထွားလာဆေးရုံသတိလစ်ခရီးသည်ခဲ့သည်
22 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
affiliates ulaşımpark Inc. မှ Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဆေးရုံသူမ၏ခစျြတဲ့သူကိုယာဉ်အတွက်ခရီးသည်များ၏လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲနေတဲ့ဘတ်စ်ကားမောင်းသူ Emrah Acar (30) ။ 112 နှင့်လည်းမိမိတို့၏အထက်အရာရှိများကသူချက်ချင်း Acer က, လျှောက်ထားပထမဦးဆုံးအကူအညီလေ့ကျင့်ရေးနေရပ်ရင်းပထမဦးဆုံးခရီးသည်ကြောင်းလေ့လာသင်ယူယာဉ်မောင်းမှဆက်သွယ်ပြောဆို။ မဆိုင်းမတွယာဉ်အတွက်ခရီးသည်တစ်ဝှမ်းကလူလူနာရဲ့သန့်ရှင်းတဲ့လေကောင်းလေဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်နောက်ပြန်ပေးအပြီးတွင်ဆေးရုံကားမောင်း။
အဆိုပါ THE First Aid သင်တန်း execute
အဆိုပါဖြစ်ရပ် Kocaeli ရဲ့ Gebze ခရိုင်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အသံနောက်ကွယ်မှထံမှလာသည်ဟုတဦးတည်းမိန်းမောတွေဝေသောဘတ်စ်ကားပေါ်မှာဒီလိုမြင်ကွင်း၏ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက် Emrah Acar ထိန်းချုပ်မှု။ ကားမောင်းသူ Emrah Acar, လုံခြုံရာအရပ်မှချက်ချင်းမော်တော်ယာဉ်တရားမျှတ။ Acer မှ, ခရီးသည်များ၏ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းကိုထွက်ရှာတွေ့မှနောက်ကျော၏။ ကို detect နှင့်ပထမဦးဆုံးအကူအညီလေ့ကျင့်ရေး၏အဓိကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုများထဲမှသုံးစွဲ listen ကြောင်းနေခြင်းဖြင့်သတိလစ်သို့မဟုတ်သိမ်းယူမှု၏ခရီးသည်အခြမ်းဟာစုဆောင်းမှုနည်းလမ်းအတွက်သိလာတဲ့အခါဝမ်းနည်းဖို့လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။
112 ချက်ချင်းအမေရိကန် CONTACT NOW ကခဲ့
အဆိုပါယာဉ်မောင်းကထိန်းချုပ်မှုသွေးခုန်နှုန်းနှင့်ခရီးသည်များ၏သွေးခုန်နှုန်းကိုသူတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဆေးရုံကိုသွားသင့်ဆုံးဖြတ်ပုံမှန်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုသို့ပြောသည်။ ထိုအခါသူသည်ခရီးသည်များ၏အဖွင့်လှည့်ပတ်နေရပ်ရင်းသင့်ကြောင်းခရီးသည်များကအခြားခရီးသည်များဆေးရုံသတိလစ်ခရီးသည်သတင်းပို့နည်းမှန်လမ်းမှန်ကိုထိမှလုံးဝလိုအပ်သောသောသိမ်းယူမှုနေခဲ့ရသည်။ သူရဲကောင်းခရီးသည်တင်ကြောင်း 112 ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်သတိလစ်ယာဉ်၏ယာဉ်မောင်း, ဒါပေမယ့်ဒါဟာသူ့ရဲ့သွေးခုန်နှုန်းကိုယူမယ်လို့မြင်း၏အဆိုးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင့် Gebze ပြည်နယ်ဆေးရုံကြီးမှအတိုဆုံးအကွာအဝေးကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။
နှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးအတွက် shift ကြီးကြပ်ရေးမှူးကားမောင်းသူ Acer ကဆိုသည်ကား, ယာဉ်စတီယာရင်ဘီးကတဆင့်စဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲဆေးရုံဆီသို့ဦးတည်မောင်း။ ဒါဟာဆေးရုံမှကြွလာသောအခါသူရဲကောင်းကားမောင်းသူကိုချက်ချင်းမကောင်းတဲ့သူတွေကိုစဉ်းစားတစ်ခုချင်းစီကိုလူနာရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှုတ်ဆက်ပြီးနှင့်အရေးပေါ်ခန်းမှသူ့ကိုခေါ်သွားတယ်။ drivers Acer မှ Emrah ယာဉ်၌သူ၏ရွေ့လျားမှုခရီးသည်သည်သူ၏သမ္မာသတိစုဆောင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ ခရီးသည်များ၏ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းကိုအဆုံးအဖြတ်ဖမ်းဆီးရမိကောင်းသောဖြစ်ပြောဆိုသုံးစွဲခဲ့သည်။
သူရဲကောင်းကားမောင်းသူဆေးရုံ Sivas အတွက်ကြီးထွားလာခရီးသည်ခဲ့သည် 27 / 06 / 2018 အဆိုပါ Sivas မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဦးစီးဌာနမှအထူးပြည်သူ့ဘတ်စ်ကားယာဉ်မောင်းဖြစ်သူ Omar Taşdemirပေါ် မူတည်. မနေ့ကယာဉ်၏ပိုင်ရှင်ဖို့ပိုက်ဆံပြန်တွေ့ရှိခဲ့အစီအစဉ်အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယာဉ်မတော်တဆမှုများနှင့်ထိတ်လန့်သို့ ဝင်. အဘယ်သူသည်Taşdemirကူညီပေးနေနိုင်ငံသားများယနေ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အတွက်သင်ခန်းစာတွေကိုပေး၏။ Sivas မြူနီစီပယ်သူလမ်းကြောင်းအပေါ်ခရီးသည်မျက်မြင်ကားမတော်တဆမှုနှင့်အတူရုံး H ကို 58 0083 ပန်းကန်ဖို့လမ်းပေါ်နေစဉ်ပြည်သူ့ဘတ်စ်ကားမောင်းသူအိုမာTaşdemirGültepeအချိန်နှင့်အတူကြားဝင်သိရသည်။ ယာဉ်မတော်တဆမှုအဘယ်သူသည်အတူတူဘတ်စ်ကားများတွင်ခရီးသည်များနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ဖို့အမျိုးသမီးတွေရိုးရာနှင့်အတူမော်တော်ယာဉ်Taşdemirဘေးရှိလမ်းဘေးပေါ်တွင်ကားထဲတွင်ထိုင်လျက်နေစဉ်တွင်သူမ၏ရင်ခွင်ထဲတွင်သူငယ်ယူပြီးပြီးနောက်အမျိုးသမီးယာဉ်မောင်းများကကြုံတွေ့အဆိုပါစျေးမှာဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ထိတ်လန့်တွင်တည်ရှိသည် ...
Muğlaရဲ့မြို့တော်အောင်မြင်သောအမျိုးသမီးယာဉ်မောင်းယာဉ်မောင်းလကပ္ပတိန်ကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ 24 / 05 / 2017 Mugla တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အောင်မြင်သောအမျိုးသမီးယာဉ်မောင်းယာဉ်မောင်းလကပ္ပတိန်ကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ: Muğlaမြူနီစီပယ်ရဲ့အောင်မြင်တဲ့အမျိုးသမီးယာဉ်မောင်း Turkan ၏ကပ္ပတိန်များအတွက်ချီးမြှင့်မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်းတစ်လယဉ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ တူရကီကုန်သည်များနှင့် Stock Exchange များပြည်ထောင်စု Turkan 40 တထောင်ကိုသုံး 19 တထောင်ဂိမ်းများကိုယဉ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် Mugla တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရဲ့အောင်မြင်တဲ့အမျိုးသမီးယာဉ်မောင်းတာ, အဗိုလ်ကြီးရဲ့ကလပ်၏အောက်ရှိပလက်ဖောင်းအားဖြင့်သုံးလကြာလဗိုလ်မင်းကားမောင်းသူကစီစဉ်တစ်ခုချီးမြှင့်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ Muğlaမြူနီစီပယ်ရဲ့ Turkan 11 သူတို့ Mugla အတွက်ယဉ်နိုင်ငံသားများများအတွက်လုံခြုံပြီးအဆင်ပြေခရီးသွားလာမှုအတွက်မွို့၌ယာဉ်မောင်းအစေခံအမျိုးသမီးတဦးတည်း, မေတ္တာနှင့်အပ်နှံလူတိုင်း၏အလုပ်အကိုင်ကိုလုပ်ဖို့အဖြစ်အပျက်၏အောင်မြင်မှု, ...
လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် Dedirten ခဲ့ulaşımparkကားမောင်းသမားသေဆုံးသွားခဲ့ပါသည် 24 / 01 / 2019 Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအရာရှိတွေ Inc ကိုulaşımparkဘတ်စ်ကားမောင်းသူသည်ဂါလိလဲညုသူအသုံးပြုတဲ့ဘတ်စ်ကားအတွင်းတွေ့ရှိခဲ့ပိုက်ဆံအပြည့်အဝခြောက်သွေ့သောပိုက်ဆံအိတ်ပို့ဆောင်အသုံးပြုပုံပိုင်ရှင်ဖို့ပေးပို့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ လိုင်း 250 ဘတ်စ်ကားအရေအတွက်က Sabiha Gokcen - သူ Izmit အချိန်ကိုဖန်ဆင်းနေစဉ်အတွင်း, ခရက်ဒစ်ကဒ်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းulaşımparkဒရိုင်ဘာငါးတည်ရှိသောလက်မှတ်အခွင့်အာဏာကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏နှုန်းတထောင်3ဘတ်စ်ကားခရီးသည်နှင့် 220 အတွက်လျော့, ဒီစံပြအပြုအမူ dedirtti နှင့်အတူလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အနိစ္စရောက်လေ၏။ ငွေ£ပိုက်ဆံအိတ်ထောင်ပေါင်းများစွာ3220 သက်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်ရေးမှူးဖို့ကိစ္စကိုပါးသူညုကားမောင်းသူကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ထိုအခါဒရိုင်ဘာပိုက်ဆံအိတ်၏မိနစ်နှင့်အတူကားဂိုဒေါင်သဲသောင်ပြင်လမ်းမကြီးဆီသို့ရောက် လာ. , ...
လ Award ဆု၏သူရဲကောင်းဗိုလ်ကြီးယာဉ်မောင်းယာဉ်မောင်း 15 / 03 / 2018 အဆိုပါမစ်ရှင် Hayrettin Sahin ကာလအတွင်းကလေးငယ်တစ်ဦး၏အသက်တာကိုချွေတာသူပထမဦးဆုံးအကူအညီလက်ခံရရှိသောပညာရေးမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, အထိခိုက်မခံအပြုအမူကြောင့်အဓိကအား Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်အာဗြဟံသည်Karaosmanoğluအပါအဝင်များစွာသောလူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကတန်ဖိုးထားခဲ့ပါတယ်။ Asaf တစ်ဗိုလ်ကြီးရဲ့ကလပ်ဆုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူကလေးရဲ့အသက်ကယ် Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, Inc Ulaşımparkဘတ်စ်ကားမောင်းသူ Hayrettin Sahin, ကနေရောက်လာတယ်။ အာဏာပိုင်များ Hawk ရဟတ်ယာဉ် hosting ကလစာပိုဆုကြေးငွေနှင့်အတူဆုခခြဲ့ရာက MONTH ၏ဗိုလ်မင်းကားမောင်းသူမြို့တော်ဝန် Ibrahim Karaosmanoğlu Hayrettin ဗိုလ်ကြီးရဲ့ကလပ်ဆုချီးမြှင့်ခဲ့့ NGO "လဗိုလ်ကြီးချော့မြှူ" ကဖြစ်ပါတယ်။ သူကပထမဦးဆုံးအကူအညီလက်ခံရရှိသောပညာရေးမှကျေးဇူးတင်ပါသည်တာဝန် ...
Metrobus ယာဉ်မောင်းလမ်းပေါ်ဖျားနာခွင့်ခရီးသည်သွား 20 / 09 / 2012 ဒါဟာဒီအချိန် "သြတ္တပ္ပစိတ်" တစ်အဖြစ်အပျက်၏မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုခေါ်နိုင်ခဲ့သည်၎င်း၏မကြာခဏ Metrobus မတော်တဆမှုနှင့်အတူတက် လာ. ။ အဆိုပါနေမကောင်းခရီးသည်တင်ယာဉ်များအနေဖြင့် deducting အားဖြင့် Metrobus ရပ်နားနေရာခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ လူနာတင်ယာဉ်ယာဉ်မောင်းကိုပဌနာဖို့မေတ္တာရပ်ခံ "လုံခြုံရေးအရာရှိတွေစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်" ဟုသူကလမ်းသညျကား, ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ မနေ့ကနံနက်9နာရီကိုဦးဆောင် Zincirlikuyu Metrobus: က "Bosphorus တံတား" xnumx't ခရီးသည်တင်ရုတ်တရက်မမှန်ခံစားရပြီးမြေပေါ်သို့ပြုတ်ကျလာသောအခါရပ်တန့်ခဲ့ရသည်။ သည်အခြားခရီးသည်တစ်ဦးလူနာတင်ကားခေါ်ပါရန်ဒရိုင်ဘာကိုမေးခဲ့တယ်။ ရင်းမြစ်: www.taraf.com.t
သူရဲကောင်းကားမောင်းသူဆေးရုံ Sivas အတွက်ကြီးထွားလာခရီးသည်ခဲ့သည်
Metrobus ယာဉ်မောင်းသူသည်လေအေးစက် (ဗီဒီယို) မှဖွင့်လှစ်တောင်းဆိုနေတာခရီးသည်တင်ဓားဖြင့်ထိုး
သတိထားကွောငျကလေးကယ်ဆယ်ရေး၏ယာဉ်မောင်းကိုနှိမ်နင်းရာမှulaşımparkနောက်ဆုံး Anda ခဲ့သည်
Las Vegas မှ 122 နေ့ကလေ့လာရေးခရီးတည်းဖြတ်အတွက်ဆေးရုံ